I-Metal Coil Drapery ye-Interio Enesitayela Nesisebenzayo ...
Insimbi Engagqwali Knotted Rope Mesh nge Long Service ...
Chainmail Gloves Gcina Izandla Zakho Ziphephile
Ingilazi Laminated Metal Mesh
Inetha lobuciko elikhethekile linezakhiwo eziyinkimbinkimbi nendlela yokweluka, kodwa muhle kakhulu.
Mesh okuhlobisa Ukwakhiwa khazi
Indwangu yensimbi yocingo lwensimbi inikeza isitayela somhlobiso wanamuhla wokwakhiwa. Uma isetshenziswa njengamakhethini, inikeza izinguquko ezinhlobonhlobo zombala ngokukhanya futhi inikeze umcabango ongenamkhawulo.
Insimbi Eyandisiwe Esetshenzisiwe Esakhiweni Isiza Ekunciphiseni Imisindo.
Isikrini se-mesh esandisiwe sinokubukeka okuhle ngamaphethini wokuqamba nokuhlobisa.
Isikrini se-Metal Perforated Sokwakha Uphahla
Uphahla lwensimbi olubunjiwe lunokuhlobisa okuhle nezici zokumunca umsindo
I-Perforated Metal Cladding igcina isakhiwo sivela ekulimaleni kwesimo sezulu
Ukugqokiswa kwensimbi yensimbi eyenziwe ngopende kusetshenziswa kabanzi kubakhi. Ihlanganisa ukuvikelwa kobumfihlo nemisebenzi eminingi njengokukhanyisa, ukungena komoya, ukuzihlukanisa, ukuvikela ilanga.
I-Stainless Steel Rope Mesh Green Wall Yezitshalo Zokukhuphuka
Intambo engagqwali intambo anezikhala udonga oluhlaza lukhuthaza ukukhula okunempilo kwazo zonke izitshalo ezikhuphukayo njengezivini kunoma iyiphi indawo, kungaba amagaraji okupaka izimoto, izinxanxathela zezitolo noma imigwaqo eluhlaza yasemadolobheni.
I-Metal Bead Curtain - Isihlukanisi Esihle Sendawo
Ikhethini lobuhlalu bensimbi, elibizwa nangokuthi iketeni lebhola lebhola, elenziwe ngamabhola amancane amancane ayinsimbi amiswa ngentambo noma iketango, lihlala lithandwa kakhulu.
I-Chain Link Curtain Igcina Izinambuzane Ezindizayo Zikude kodwa Kuheleza Umoya Osha Nokukhanya
I-Chain Link Curtain - Ukukhetha Okuhle Kwangaphakathi Kwedizayini Yakho Yesixhumanisi ikhethini, ebizwa nangokuthi i-chain fly screen, yenziwa ngocingo lwe-aluminium ngokulashwa komhlaba nge-anodized. Njengoba sonke sazi, i-aluminium impahla ayisindi, iyavuseleleka, ihlala isikhathi eside futhi inesakhiwo esiguquguqukayo. Lokhu kuqinisekisa ikhethini lesixhumanisi sokuxhuma linokumelana okuhle nokugqwala nezakhiwo ezinhle zokuvimbela umlilo. Amakhethini wokuhlobisa amaketanga okuhlobisa ahlinzeka ngokuvikelwa okuthile ngaphezu kwemiphumela emihle yokuhlobisa. Ngesikhathi esifanayo ...
I-Conveyor Belt Mesh Ifanelekile ekwakhiweni kwe-Facade nase-Cladding.
Ibhande lethu lokuthutha lokwakha lifaka ibhande elihamba ngocingo olucijile, ibhande lokuluka eliphindwe kabili, ibhande lokulinganisa elilingene neladi elihambayo.
Architectural Nokwelukiweyo Mesh Isetshenziselwa Ukwakha olungaphambili lwesonto khazi
Umhlobiso wensimbi wokuhlobisa ulukwe waba ngamaphethini ahlukile ahlukile, futhi unezinzuzo zokwakhiwa okuphawulekayo, ukwakhiwa kwesondlo okuphansi, ukusebenza kahle kwamandla nokusimama kwezinto ezibonakalayo.
I-Metal Coil Drapery Yokwakheka Kwangaphakathi Nesitayela
I-Metal coil drapery inempahla enhle kakhulu engangenamlilo, ukungena komoya nokudluliswa kokukhanya, okuyisinqumo esikahle sokuhlobisa kwangaphakathi nangaphandle.
Isikali Mesh Curtain for Space Divider and Interior Design
Ikhethini le-mesh lesikali lenziwe ngemicu exhunyiwe yamashidi e-aluminium, ahlanganiswe ndawonye ohlangothini futhi anezintambo eziningi ezinamathiselwe noma ezilukiwe.